Gbasara anyị - Hebei Junyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Hebei Junyu Pharmaceutical Co., Ltd, e guzobere na 1999, nke bụ ọkachamara ọgwụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na R & D, Production, Marketing na nka na ụzụ Service. Ugbu a, ọ na-arụpụta ihe karịrị 100kinds nke ngwaahịa anụmanụ na mbọ iji jeere ndị ahịa ụwa niile ngwaahịa nke oke mma, nchekwa na nrụpụta ọrụ na-agbaso usoro iwu chọrọ nke GMP.
Anyị nwere usoro zuru ezu nke ihe ngwọta, mmiri soluble ntụ ntụ, mbadamba ọgwụ maka ụdị ọgwụ nje, mgbakwunye na-edozi ahụ, vitamin na mineral na acids, disinfectant. Nzube iji nye anụ ụlọ na anụ ọkụkọ ebe obibi dị mma na uto. Solutionsfọdụ azịza dịka AD3E, EGG MORE, LIVER PROTECTOR, Vitamin E na Sodium selenite, Toltrazuril na ndị ọzọ.
Junyu na-ebunyekwa ọgwụ ọgwụ ahịhịa yana ngwa ọrụ dị elu, na-enyekwu ọgwụ ahụike ọdịnala China nke na-arịa ọrịa na-efe efe na nchebe akụkụ, dị ka ọgwụ Supervirus Ngwọta Oral, ire ọkụ na ahịa na ezigbo nyocha.
Iji na-enye ndị ọzọ ngwaahịa na ọrụ na ndị ahịa na na mba ọzọ, Anyị melite Hebei Socare Biological Pharmaceutical Co., Ltd nke a na-aku ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na nkà mmụta ọgwụ ngwaọrụ R & D na mmepụta; Shijiazhuang Garibas Import & Export Trading Co., Ltd, nke na-etinye aka na mbubata na mbupụ azụmahịa nke ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ. Shijiazhuang Junyu Veterinary Medicine Science and Technology Co., Ltd nke na-etinye aka na nyocha ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na mmepe.
Quality e ndụ nke anyị ụlọ ọrụ. Nkwenye nke ogo nwere ọrụ buru ibu iji chọpụta na usoro ejiri rụọ ọrụ niile. A na-akọwapụta nhazi nyocha na ịgbaso ya. Anyị na-quality mgbe na obi anyị na-agba ọsọ na ihe niile ndị mmadụ na-quality obi ike.